5 tii Golaha Sare ee Kacaanka Afweyne iyo 5 tan Kacaanka Kulmiye!. W/Q Cabdirasaaq Askar
Sunday September 02, 2018 - 02:40:29 in Wararka by Super Admin
Waxaynu ognahay taariikhdii iyo hab-dhaqankii foosha xumaa ee ee
kaligii taliye Afweyne cahdigii uu ka talinaayey dalkii la isku odhan
jiray Somaliya iyo waliba ficiladii kibirka , islaweynida ,
isasareysiinta, istusnimada ku qotomay uuna ula baxay magacyada badan
oo ay kamid ahayd SHANTII GOLAHA SARE EE KACAANKA. Oo uu ku dhajiyey
sawiradooda meel wal oo magaalooyinkii dalka ahaa. Waa astaamaha lagu
yaqaan nidaamka faashiga ah ee ku dhisan kali-talisnimo iyo kibir.
Waana jidka ummad iyo qaran u horseeda inuu burburo, shacabkuna
noqdaan kuwa kala qaybsan , kuwa ku raacsan habdhaqanka nidaamka jira
iyo kuwa lidi ku ah . taana waxaa tusaale inoogu filan taliskii
dhiig-yacabka ahaa ee uu hormoodka ka ahaa Siyaad Bare.
Haddaba, wakhtigan waxaan inoo muuqda oo dadkii aynu dalka u dooranay
ka muuqda sifihii Siyaad bare oo kale iyo sansaantii uu lahaa ee u
horseeday inuu burburo. Shanti sawir ee Siyaad ugu yeedhay shanti
golaha sare miyuuna lamid ahayn shantan Kacaanka Kulmiye meel walba ku
dhajiyey 28 kadib burburkii Dawladii Afweyne. Dad badan ayay markay
sawirkan arkaan dib u xasuustay baryo samaad iyo taariikhdii madow
bayd ee dalkan iyo dadkani soo mareen.
Waxaan ku soo afjarayaa; jidkan uu cagta saaray nidaamkan dalka aynu u
dooranay waa mid horseedi kara burbur hor leh oo qaranka ku yimaad ,
hadduuna wax ka badalin habdhaqankan foosha xun.